Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.10 + bee! | Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုမြှင့်တင်ရေးအသင်း
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.10 + bee!
Aprilပြီလ 2021,4ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
နွေ ဦး ပြissueနာ
အနုပညာလူ- ပရိဘောဂနှင့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ Indoor History of Society ဥက္ကဋ္ဌ / မှတ်ပုံတင်ထားသော မြင်သာထင်သာရှိသော ယဉ်ကျေးမှုပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ Showa Living Museum ၏ ဒါရိုက်တာ Kazuko Koizumi + ပျား။
Shotengai x Art- လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် "TeAL GREEN in Seed Village" + bee လက်ဖက်ရည်ကို သင်ခံစားနိုင်သော ရုပ်ပုံစာအုပ်ဆိုင်။
အနာဂတ်အာရုံစူးစိုက်မှု EVENT + ပျား။
အနုပညာလူ + ပျား!
ပရိဘောဂကို ဂျပန်တွင် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် အနုပညာလက်ရာအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုပါ။
"ပရိဘောဂကိရိယာများ Indoor History Society ဥက္ကဌ / မှတ်ပုံတင်ထားသော မြင်သာထင်သာရှိသော ယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်း Showa Living Museum Director, Kazuko Koizumi"
Showa Living ပြတိုက်သည် ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သော သာမန်လူများ၏ အိမ်များကို အိမ်သုံးပစ္စည်းများဖြင့် ထိန်းသိမ်းဖွင့်လှစ်ပေးသည်။ဒါရိုက်တာ Kazuko Koizumi သည် ဂျပန်နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ပရိဘောဂ အတွင်းပိုင်း ဒီဇိုင်းသမိုင်းနှင့် ဘဝသမိုင်းကို သုတေသနပြုသူဖြစ်ပြီး ပရိဘောဂနှင့် ကိရိယာများအတွင်းပိုင်းသမိုင်းအသင်း၏ ဥက္ကဌလည်းဖြစ်သည့် ဂျပန်နိုင်ငံကိုယ်စားပြုလည်းဖြစ်သည်။စစ်ပြီးခေတ် မငြိမ်မသက်ဖြစ်မှုတွင်၊ Sendai ရင်ဘတ်နှင့် ထိတွေ့မှုသည် ဂျပန်ပရိဘောဂဆိုင်ရာ သုတေသနပြုမှုလမ်းကြောင်းဆီသို့ ဦးတည်သွားစေခဲ့သည်။
ရှေးယခင်က ပရိဘောဂများကို နေရာဒေသတစ်ခုစီက ပြုလုပ်ကြသည်။
Joshibi University of Art and Design မှာ အနောက်တိုင်း ပန်းချီပညာကို လေ့လာပြီးနောက် ပရိဘောဂ ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။
"၁၉၅၉ ခုနှစ်တုန်းက သမ္မတနဲ့ ကျွန်တော် သုံးယောက်ပဲ ပါတဲ့ ကုမ္ပဏီသေးသေးလေး တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် ဒီဇိုင်းဆွဲတယ်။ စာရင်းကိုင်နဲ့ ဒီဇိုင်းလည်း လုပ်တယ်။ အဲဒီတုန်းက ပရိဘောဂ အဆင့်က အရမ်းနည်းတယ်။ အဝတ်အစားက အသားရောင်တောင်၊ ဖလက်ရှ်ဖွဲ့စည်းပုံလို့ ခေါ်တဲ့ သစ်သားဘောင်ရဲ့ နှစ်ဘက်စလုံးမှာ veneer board တွေနဲ့ ပရိဘောဂတွေက လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲမှာ မီးလောင်ပြီး ဘာမှမကျန်တော့တဲ့အတွက် အရည်အသွေးမခွဲခြားဘဲ တစ်ခုခုတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
Sendai ရင်ဘတ်များနှင့် ဂျပန်ပရိဘောဂများ ကြုံတွေ့ရသည့်အကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပေးပါ။
"အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော် Komaba ရှိ Japan Folk Crafts Museum* ကို သွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်ကတည်းက ရိုးရာလက်မှုပညာ ပြတိုက်ကို ခဏခဏ ရောက်ဖူးတယ်။ ထမင်း ချက်စားရင်းနဲ့ စကားပြောတယ်။ အလုပ်သွားတုန်းက၊ ပရိဘောဂတွေပေါ်မှာတော့ Sendai က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ပရိဘောဂတွေ ဖန်တီးနေတယ်လို့ ပြတိုက်မှူးက ပြောပြတယ်။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော် Sendai ကိုသွားတယ်။မနက်မိုးလင်းတော့ Sendai ကိုရောက်ပြီး ပရိဘောဂဆိုင်တွေ တန်းစီနေတဲ့ လမ်းကို သွားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဆိုင်တွေအားလုံးက အနောက်တိုင်း အံဆွဲသေတ္တာတွေပဲ တန်းစီနေတယ်။ခြားနားတဲ့ အရာတစ်ခုကြောင့် စိတ်ပျက်မိပြီး ရုတ်တရက် နောက်ကျောကို ကြည့်လိုက်တော့ အဟောင်းတစ်ခုခုကို ပြုပြင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက် ရှိနေတယ်။သူက ခေတ်မမီသေးတဲ့ Sendai ရင်ဘတ်တွေ လုပ်သေးတယ်လို့ ပြောခိုင်းပြီး ချက်ချင်းပဲ သူ့ကို မေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော် အလည်လာတုန်းက တိုကျိုက မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ကျွန်တော့်ခင်ပွန်းဟောင်းက ပုံပြင်ဟောင်းတွေ အမျိုးမျိုးပြောပြတာကို အံ့သြသွားတယ်။ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ မိရိုးဖလာအလုပ် လုပ်ကြတဲ့ လူတွေရဲ့ နွေးထွေးမှု ဒါမှမဟုတ် စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ လူတွေရဲ့ နွေးထွေးမှုကို ကျွန်တော် သဘောကျမိတယ်။ “
"မေဂျီခေတ်ကတည်းက Sendai သေတ္တာတွေကို အိမ်က တင်ပို့ခဲ့တာဆိုတော့ Sendai ရင်ဘတ်တွေကို နိုင်ငံခြားမှာ သိထားပုံရတယ်။ အဲဒါက နိုင်ငံခြားသားတွေ ကြိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းပါပဲ။ စစ်ပြီးရင် Sendai မှာ တပ်တွေရောက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် Sendai ရင်ဘတ်တွေကို လိုက်ရှာခဲ့တယ်၊ Sendai မှာတင်မကဘဲ ရှေးယခင်က ဒေသအသီးသီးမှာ ထူးခြားတဲ့သေတ္တာတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပေမယ့် Showa ခေတ်မှာတော့ တိုကျိုရင်ဘတ်အဖြစ် စံသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
Shiogama City ရှိ အိမ်တွင်းဒီဇိုင်း Ogiwara Miso Soy Sauce ဆိုင်ဖြစ်လာသော Sendai ရင်ဘတ် (အလယ်)
Kazuko Koizumi Life History Institute မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
ပရိဘောဂသမိုင်းကို ဘယ်သူမှ မလေ့လာခဲ့ဘူး။အားလုံးက ကိုယ်တိုင် သင်ပေးတယ်။
ထို့နောက် ကျွန်တော်သည် တိုကျိုတက္ကသိုလ်၊ ဗိသုကာဌာန၊ အင်ဂျင်နီယာဌာနတွင် သုတေသနကျောင်းသားဖြစ်လာခဲ့သည်။အစပျိုးမှုကား အဘယ်နည်း။
ပရိဘောဂအရောင်းဆိုင်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ရင်း ပရိဘောဂသမိုင်းကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ “မော်ဒန်အိမ်ရာသမိုင်း” (ယုဇန်ကာကု ထုတ်ဝေရေး ၁၉၆၉ ခုနှစ်)၊ အသက် ၃၄ နှစ်၊ အိုးအိမ်အကြောင်း တခြား ဆရာတွေရေးပြီး ပရိဘောဂအကြောင်းရေးတယ်။ ကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ Hirotaro Ota သည် တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှ ဗိသုကာပညာသမိုင်း၏ ဗိသုကာပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနကျောင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။"
ကောလိပ်မတက်ခင်မှာ သုတေသနလုပ်ခဲ့ပြီး စာအုပ်တစ်အုပ် ထုတ်ဝေခဲ့တယ် မဟုတ်လား?
"ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် သဲကြီးမဲကြီး သုတေသနလုပ်ခဲ့တယ်။ ပရိဘောဂသမိုင်းကို သုတေသနပြုတာက မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ဗိသုကာဆိုင်ရာ သမိုင်းသုတေသနနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး စူးစမ်းလေ့လာမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လေ့လာကြည့်တော့ တယောက်ပြီး တယောက် လုံးဝ စိတ်မဝင်စားဘူး”
ပရိဘောဂကို ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားဘူး။ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးကို မသိခဲ့ပါ။
ပရိဘောဂကို အနုပညာအနေနဲ့ ပြောလို့ရလား။
"ပရိဘောဂသည် လက်တွေ့နှင့် အနုပညာ အသွင်အပြင် နှစ်မျိုးလုံးရှိသည်။ အချို့သော ပရိဘောဂများသည် လက်တွေ့ကျသော်လည်း အချို့မှာ အနုပညာလက်ရာများကဲ့သို့ ကောင်းမွန်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုအရ အဖိုးတန်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ပရိဘောဂများသည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးကို အသိအမှတ်မပြုပါ။ ၎င်းကို Daitokuji တွင် Ryukoin ဟုခေါ်သည်။ ကျိုတို။မျှော်စင်ခေါင်းတက်တူးရှိတယ်လျှို့ဝှက်သင်္ခမ်းမီတန်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နှင့် Tenmoku လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံးကဲ့သို့သော နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာများစွာကို သိမ်းဆည်းထားသည့် ဘုရားကျောင်းဖြစ်သည်။ရိုးရှင်းပြီး လှပပြီး နည်းပညာမြင့် စားပွဲခုံတစ်ခု ရှိခဲ့သည်။တည်ထောင်သူKogetsu Sotoiကင်ဆာ၎င်းသည် (၁၅၇၄-၁၆၄၃) အသုံးပြုခဲ့သော စာရေးစားပွဲဖြစ်သည်။ဤသူသည် Sen no Rikyu နှင့် Imai Sokyu တို့နှင့်အတူ လက်ဖက်ရည်ဆရာ Tsuda Sogyū ၏သားဖြစ်သည်။စားပွဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ Rikyu တီထွင်ထားတဲ့ morus alba စားပွဲကို တွေ့လိုက်တယ်။၎င်းသည် အမျိုးသားရေးအရ အရေးကြီးသော ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သော စားပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။Ryukoin သည် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာများစွာရှိသည့် ထင်ရှားကျော်ကြားသောဘုရားကျောင်းဖြစ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုရေးရာအေဂျင်စီမှ လူများလာရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိသော်လည်း ပရိဘောဂကိုမည်သူမျှဂရုမစိုက်သောကြောင့် ၎င်းကိုသိရှိခြင်း သို့မဟုတ် အကဲဖြတ်ခြင်းမရှိပေ။ “
သက်ရှိနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာဖြစ်သော Kenji Suda မှ ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော Rikyu Morus alba စားပွဲ
တည်ထောင်သူရဲ့ အရာတစ်ခုအနေနဲ့ မြတ်နိုးပေမယ့် ဒါဟာ အနုပညာလက်ရာ ဒါမှမဟုတ် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုလို့ မထင်ခဲ့မိပါဘူး။
"အဲဒီလို ဥပမာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါက ကျိုတိုမှာရှိတဲ့ Manshuin* ကို သွားကြည့်တုန်းက ဇာတ်လမ်းပါ။ အဲဒိုခေတ်မှာ မင်းသား Hachijo Tomohito ရဲ့ ဒုတိယမင်းသားဖြစ်တဲ့ Katsura Imperial Villa ရဲ့ မင်းသားကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဘုရားကျောင်း၊ အစောပိုင်း Sukiya ပုံစံ Shoin-zukuri ဗိသုကာလက်ရာ။ Shoin-zukuri သည် သခင်ဘုရား၏နန်းတော်ဖြစ်ပြီး Sukiya-zukuri သည် လက်ဖက်ရည်သောက်ခန်းဖြစ်ပြီး တစ်ခုမှာ Katsura Imperial Villa ဖြစ်သည်။
Manshuin ၏စင်္ကြံ၏ထောင့်တွင်ဖုန်မှုန့်စင်တစ်ခုရှိသည်။နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စင်လေးမို့ အဝတ်စုတ်တစ်ထည် ငှားပြီး သုတ်လိုက်တယ်။ဗိသုကာပညာအရ၊ ၎င်းသည် Sukiya-zukuri Shoin မှတည်ဆောက်ထားသောစင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအချိန်အထိ မင်းမျိုးမင်းနွယ်များ၏ ပရိဘောဂများသည် ယွန်းယွန်းလက်ရာကဲ့သို့သော ရှိန်းဇူကုရီစတိုင်ဖြစ်သည်။ထိပ်အိတ်၏ဖွဲနုအတွက်နူးညံ့သော ဘရိုကိတ်Zenkinကျွန်တော့်မှာ ဘရိုကိတ်အနားသတ်တစ်ခုရှိတယ်။Shoin-zukuri လည်းဖြစ်သည်။အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ စင်များသည် ဆူကီယာပုံစံဖြစ်ပြီး သစ်သားမျက်နှာပြင်ပါရှိသည်။၎င်းသည် Sukiya စတိုင်ရှိုးမှပြုလုပ်သည့်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိသည့် အဖိုးတန်စင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အစောဆုံးဖြစ်ပြီး ၎င်းကို မည်သူအသုံးပြုသည်ကို သင်သိပါသလား။ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ သတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။ထို့ကြောင့် ပရိဘောဂများကို ယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်း သို့မဟုတ် အနုပညာလက်ရာတစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုပါ။ "Japanese Art Japanese Furniture" (Shogakukan 1977) ကို အင်တာဗျူးခဲ့ပါတယ်။ “
Manshuin Monzeki စင်
အဲဒါကို လူတိုင်း သတိပြုမိခဲ့တယ်။
"ဂျပန်ပရိဘောဂတွေမှာ ဂန္တဝင်စတိုင်၊ Karamono စတိုင်၊ ဆူကီယာစတိုင်၊ ရိုးရာအနုပညာစတိုင်နဲ့ ခေတ်သစ်ပန်းချီဆရာတွေရဲ့ လက်ရာတွေရှိပါတယ်။ ဂန္တဝင်စတိုင်ကတော့ စောစောကပြောခဲ့သလို ယွန်းထည်လက်မှုပညာပါ။ဂွေမာကီ·Urushi-eUrushie·RadenRadenစသည်တို့ကို အသုံးချနိုင်ပါသည်။ဧကရာဇ်နှင့် မင်းမျိုးမင်းနွယ်များကဲ့သို့ ရာထူးကြီးသူများ အသုံးပြုသော ပရိဘောဂများ။Karamono စတိုင်သည် တရုတ်ဒီဇိုင်းဖြင့် rosewood နှင့် ebony ကို အသုံးပြုထားသည်။Sukiya စတိုင်သည် လက်ဖက်ရည်ပွဲနှင့်အတူ ဖြစ်ပေါ်လာသော အခေါက်ကို အသုံးပြုသည်။ပန်းရံပန်းရံ၎င်းသည် ပရိဘောဂဖြစ်သည်။ရိုးရာအနုပညာစတိုင်သည် အီဒိုခေတ်မှ မေဂျီခေတ်အထိ လူတို့ကြားတွင် တီထွင်ခဲ့သော ရိုးရှင်းသော ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ခေတ်သစ်ပန်းချီဆရာများ၏ လက်ရာများသည် မေဂျီခေတ်ကတည်းက သစ်သားလက်မှုအနုပညာလက်ရာများဖြစ်သည်။ထိုအချိန်အထိ ပရိဘောဂများကို လက်သမားဆရာများက ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး စာရေးဆရာဖြစ်မည့်အစား ယခုခေတ်တွင် စာရေးဆရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ပရိဘောဂများသည် မတူညီသောအချိန်နှင့် အမျိုးအစားများစွာဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါသည်။ “
ဆရာမ မလေ့လာမချင်း ဂျပန်ပရိဘောဂသမိုင်းကို မလေ့လာခဲ့ဘူးလား။
"ဟုတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ စေတနာထားပြီး မလုပ်ကြဘူး။ ဒါကြောင့် Yoshinogari သမိုင်းဝင် ပန်းခြံကို ငါလုပ်တုန်းက အဆောက်အဦထဲမှာ ဗိသုကာပညာသမိုင်းမှာ လူတွေရှိခဲ့ပေမယ့် အတွင်းပိုင်းကို ဘယ်သူမှ မသိကြတဲ့အတွက် အခန်းကို ပြန်ပြင်လိုက်တာ ဘယ်သူမှ မလုပ်ပါဘူး။ ပရိဘောဂများစွာနှင့် အိမ်တွင်းသမိုင်း။
ကျွန်တော့်အလုပ်ရဲ့ နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ အပိုင်းကတော့ ခေတ်မီ အနောက်တိုင်းပုံစံ ပရိဘောဂတွေအကြောင်း သုတေသနလုပ်ပြီး အဲဒီအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ပြုပြင်မွမ်းမံမှုပါ။ “
ပရိဘောဂတွေကို မပြုပြင်ဘဲ ပစ်ထားခဲ့တယ်။
ဆရာမသည် နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် အရေးပါသော ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသော အနောက်တိုင်းပုံစံ အဆောက်အဦများတွင် ပရိဘောဂများ ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
"Arisugawa TakehitoArisugawa no Miyatakehitoသူ၏ဧကရာဇ်ဘုရင်ကြီး Tenkyokaku ၏အိမ်တွင်ပရိဘောဂများပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသည်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။၎င်းသည် 56 (Showa 1981) ဖြစ်သည်။သဘာဝအားဖြင့်၊ အမျိုးမျိုးသော ပရိဘောဂဟောင်းများသည် အရေးကြီးသော ယဉ်ကျေးမှုဂုဏ်သတ္တိများ၏ ဗိသုကာလက်ရာများတွင် ကျန်ရှိနေပါသည်။သို့သော်လည်း ယဉ်ကျေးမှုရေးရာအေဂျင်စီသည် ပရိဘောဂများကို ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ် မသတ်မှတ်ထားပေ။ထို့ကြောင့် အဆောက်အအုံကို ပြုပြင်သည့်အခါတွင် ပရိဘောဂများကို စွန့်ပစ်ကြသည်။ပြန်လည်ထူထောင်ချိန်တွင် Tenkyokaku သည် Mr. Matsudaira ဖြစ်ပြီး Arisugawanomiya ၏ ဆွေမျိုးဖြစ်ကြောင်း ဖူကူရှီးမားစီရင်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောကြားခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် Tenkyokaku သည် ၎င်း၏ ဆွေမျိုးများ၏ အိမ်သဖွယ် ဖြစ်နေပုံရပြီး ပရိဘောဂများကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ တိုက်ရိုက် ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ပြန်လည် ပြုပြင်ခဲ့သည်။ပရိဘောဂအားလုံးဖြင့် အခန်းသည် အသက်ဝင်ပြီး လှပလာသည်။ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ အရေးကြီးသော ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ပရိဘောဂများကို ပြန်လည် ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။Ota Ward အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ဥယျာဉ်ပြတိုက်ဖြစ်လာသည့် ယခင် Asaka Palace ၏ ပရိဘောဂများကို ပြန်လည်ပြုပြင်လျက်ရှိသည်။Yoshinogari မှ ယခင် Asaka နန်းတော် စံတော်ချိန်အထိ၊ ငါလုပ်သင့်တယ်။ “
Asaka Palace Restoration Furniture ဟောင်း
"ကျွန်တော် အခု ကိုရီးယား ပရိဘောဂတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ရေးနေပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ရေးဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် အရမ်းရေးချင်တာ တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် သုတေသနရဲ့ အထွတ်အထိပ် ဖြစ်မယ့် စာအုပ်နှစ်အုပ်ကို ထုတ်ဝေချင်ပါတယ်"
အခြားစာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ အကြောင်းအရာက ဘာလဲ။
* ဂျပန်ရိုးရာလက်မှုပညာပြတိုက်- တွေးခေါ်ရှင် Yanagi Soetsu နှင့် အခြားသူများမှ 1926 ခုနှစ်တွင် Mingei ဟုခေါ်သော အလှတရား၏ အယူအဆသစ်ကို လူကြိုက်များလာစေရန်နှင့် "အလှတရားကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရန် ရည်ရွယ်၍ Mingei လှုပ်ရှားမှု၏ အခြေခံအဖြစ် ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် စီစဉ်ခဲ့သည်။ 1936 အကူအညီဖြင့်။ကြွေထည်များ၊ ဆေးဆိုးထားသော ယက်လုပ်ပစ္စည်းများ၊ သစ်သားယွန်းထည်ပစ္စည်းများ၊ ပန်းချီများ၊ သတ္တုထည်ပစ္စည်းများ၊ ပန်းရံပစ္စည်းများ၊ နှင့် ကျစ်ထားသောပစ္စည်းများကဲ့သို့သော ဂျပန်နှင့် အခြားနိုင်ငံများမှ လက်မှုပညာအသစ်နှင့် အဟောင်း ၁၇,၀၀၀ ခန့်ကို Yanagi ၏ အနုသယမျက်လုံးများဖြင့် စုဆောင်းသိမ်းဆည်းထားသည်။
* Muneyoshi Yanagi - ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းတွေးခေါ်ရှင်တစ်ဦး။ 1889 ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ယခုအခါ တိုကျို၊ Minato-ku၊ကိုးရီးယား ကြွေထည်များ၏ အလှကို စွဲလန်း ကာ Yanagi သည် ကိုရီးယား လူမျိုး များ အား ဖူးမြော် ကြပြီး အမည်မသိ လက်မှုပညာ ရှင်များ ၏ နေ့စဥ် အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ ၏ အလှ ကို မျက်လုံးဖွင့် ကြည့် လိုက် သည် ။ထို့နောက် ဂျပန်တစ်ဝှမ်းမှ လက်မှုပညာများကို ရှာဖွေစုဆောင်းစုဆောင်းနေစဉ်၊ 1925 ခုနှစ်တွင် သူသည် ရိုးရာလက်မှုပညာ၏ လှပမှုကို ဂုဏ်ပြုရန်အတွက် "Mingei" ဟူသော စကားလုံးအသစ်ကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး Mingei လှုပ်ရှားမှုကို စိတ်အားထက်သန်စွာ စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်ရိုးရာလက်မှုပညာပြတိုက်ကို ဖွင့်လှစ်သောအခါ ပထမဆုံး ဒါရိုက်တာဖြစ်လာခဲ့သည်။ 1936 ခုနှစ်တွင် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ သူသည် 1957 ခုနှစ်တွင် 1961 နှစ်ကြာကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
* Daitokuji ဘုရားကျောင်း: 1315 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။Onin စစ်ပွဲကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရသော်လည်း Ikkyu Sojun ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။Hideyoshi Toyotomi သည် Nobunaga Oda ၏ ဈာပနကို ကျင်းပခဲ့သည်။
* Tatchu: တပည့်များသည် သီလကို တောင့်တကြပြီး Odera ၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း ကွယ်လွန်ပြီးနောက် သင်္ချိုင်းအနီးတွင် တည်ထောင်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းငယ်လေးဖြစ်သည်။ကြီးမားသော ဘုရားကျောင်းကြီး၏ ပတ်လည်တွင် သေးငယ်သော ဘုရားကျောင်းတစ်ခု။
* Manshuin - ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီး Saicho မှ Enryaku (728-806) ကာလအတွင်း Hiei တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။Meireki (2) ၏ ဒုတိယနှစ်တွင် Katsura Imperial Villa ကို တည်ထောင်သူ မင်းသား Hachijo Tomohito သည် ကျောင်းတော်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
* Tenkyokaku- သူ၏ဧကရာဇ်တော်ဝင်မင်းသား Arisugawa Takehito အတွက် ဗီလာအဖြစ် Inawashiro ရေကန်အနီးတွင် တည်ဆောက်ထားသော အနောက်တိုင်းပုံစံ အဆောက်အအုံ။Renaissance ဒီဇိုင်းဖြင့် အဆောက်အအုံအတွင်းပိုင်းသည် မေဂျီခေတ်၏ ရနံ့ကို ဖော်ညွှန်းသည်။
"Showa Living Museum" တွင် Kazuko Koizumi
၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် တိုကျို၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။အင်ဂျင်နီယာပါရဂူ၊ ပရိဘောဂနှင့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏ အတွင်းပိုင်းသမိုင်းအဖွဲ့အစည်း ဥက္ကဋ္ဌနှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော မြင်သာထင်သာရှိသော ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Showa Living Museum ၏ ဒါရိုက်တာ၊ဂျပန်ပရိဘောဂအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းသမိုင်းနှင့်ဘဝသမိုင်းသုတေသီ။ သူသည် "History of Interiors and Furniture" (Chuokoron-sha) နှင့် "TRADITIONAL JAPANESE FURNITURE" (Kodansha International) ကဲ့သို့သော စာအုပ်ပေါင်းများစွာကို ရေးသားခဲ့သည်။ကျိုတို အမျိုးသမီး တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခဟောင်း။
တည်နေရာ / 2-26-19 Minamikugahara, Ota-ku, Tokyo
ဝင်ရောက်ခြင်း / Tokyu Ikegami Line ရှိ "Kugahara Station" မှ 8 မိနစ် လမ်းလျှောက်ပါ။Tokyu Tamagawa လိုင်းရှိ "Shimomaruko Station" မှ 8 မိနစ် လမ်းလျှောက်ပါ။
ရုံးဖွင့်ချိန်နာရီ ၁၃ နာရီမှ ၁၈ နာရီကြားနာရီထိ
ဆိုင်ဖွင့်ရက်များ / သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နှင့် ရုံးပိတ်ရက်များ
ဖုန်း / ၀၃-၅၇၃၆-၀၇၃၁
စျေးဝယ်လမ်း x အနုပညာ + ပျား။
လူတွေနဲ့ စာအုပ်တွေကို ဂရုတစိုက် ချိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
လက်ဖက်ရည်သောက်လို့ရတဲ့ ရုပ်ပုံစာအုပ်ဆိုင်စိမ်းပြာTeal GREENအစိမ်းရောင် in အစေ့မျိုးစေ့ ရွာရွာ"
ဆိုင်ရှင်- Yumiko Tanemura
Musashi Nitta ဘူတာကနေ Kanpachi Dori ကိုဖြတ်ပြီး မူကြိုကျောင်းတံခါးကို ညာဘက်ကွေ့ပြီး အဖြူရောင်နံရံမှာ သစ်သားဆိုင်းဘုတ်ပါတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုတွေ့ရမှာပါ။လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် လက်ဖက်ရည်သောက်နိုင်သည့် "TeAL GREEN in Seed Village" ရုပ်ပုံစာအုပ်ဆိုင်။နောက်ဖေးကတော့ ကော်ဖီဆိုင်လေးဖြစ်ပြီး ကလေးတွေနဲ့တောင် အပန်းဖြေလို့ရတဲ့နေရာပါ။
လူနေရပ်ကွက်ရှိ စာအုပ်ဆိုင်များ၏ တည်နေရာကို အကျဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ချင်ပါတယ်။
ဘယ်အရာက မင်းကို စတင်စေတာလဲ။
"Kugahara ရဲ့ Kugahara Sakaekai (Minamikugahara) မှာ ပထမဆုံး စိမ်းပြာရောင်ရှိတယ်။ အဲဒါက အရမ်းကောင်းတဲ့ ပုံစာအုပ်ဆိုင်မို့လို့ ဖောက်သည်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အဲဒီကို သွားဖူးတယ်။ ဒီလိုပါပဲ။
၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှာ စတိုးဆိုင်ပိတ်တော့မယ်လို့ ကြားသိရတဲ့အခါ အဲဒီဒေသက ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ စတိုးဆိုင်ကြီး ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာ တကယ်ကို လွမ်းဆွတ်မိပါတယ်။ကလေးပြုစုပျိုးထောင်မှု ပြေလည်သွားပြီးနောက် ဒုတိယဘဝတွင် ဘာလုပ်ရမည်ကို တွေးတောနေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်၏အိမ်ကို ပြန်လည်မွမ်းမံပြီး တစ်နှစ်ကြာအောင် ၂၀၀၆ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ဤနေရာတွင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သည်။ “
"အရင်ပိုင်ရှင်က နာမည်ပေးထားတာ။ စိမ်းပြာရောင်က စိမ်းပြာရောင် အထီးတွေရဲ့ ခေါင်းပေါ်မှာ စိမ်းပြာရောင် စိမ်းပြာရောင်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ပိုင်ရှင်က ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ပါ။ ဂျပန်ရိုးရာ အရောင်တွေထဲမှာ ဒီနာမည်ကို ရွေးခဲ့တာလို့ ထင်ရပါတယ်။
Inseed ရွာသည် ကျွန်ုပ်၏အမည် Tanemura မှဖြစ်သည်။Tyr-Teal သည် Kugahara မှ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး Chidori တွင် ဆင်းသက်ခဲ့သည်။မျိုးစေ့ရွာ = Tanemura ၏အိမ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည့် ဇာတ်လမ်းကို အသစ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်တွင် ယခင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “
သင်နှင့် ပတ်သက်သော စာအုပ်များအကြောင်း ပြောပြနိုင်ပါသလား။
"ကျွန်တော်တို့မှာ ဂျပန်နဲ့ပြည်ပက ကလေးစာအုပ်ပေါင်း5လောက်ရှိတယ်။ စာရေးဆရာတွေအတွက် ပို့စကတ်တွေ၊ စာတွေ အစုံရှိတယ်။ မင်းကို စာရေးစေချင်တယ်။ လက်ရေးနဲ့ရေးထားတဲ့ စာလုံးတွေက ကောင်းတယ်။"
ဆိုင်၏ သဘောတရားနှင့် အင်္ဂါရပ်များကို ပြောပြပါ။
"ကျွန်တော်က လူနေရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ စာအုပ်ဆိုင်တွေရဲ့ တည်နေရာကို အများဆုံး ဖန်တီးချင်တာပါ။ ဖောက်သည်တွေကို ဒီဆိုင်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ပွဲကို ကျင်းပခြင်းဖြင့် စာအုပ်လောကနဲ့ ပိုမိုနီးကပ်စွာ ခံစားစေချင်ပါတယ်။"
ဘဝအတွေ့အကြုံမျိုးစုံရှိတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူမို့ အနှစ်သာရကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
စာအုပ်လောကရဲ့ ကျက်သရေရှိမှုက ဘာလဲ။
"ငယ်ငယ်ကတည်းက စိတ်ပူခဲ့တာက စာအုပ်ထဲက စကားလုံးတွေကို ကျော်လွှားပြီးပြီလို့ ခံစားရတယ်။ ကလေးတွေရော လူကြီးတွေရော ဒီလိုစကားလုံးတွေ ပါစေချင်တယ်။ ကလေးရော လူကြီးတွေရော ကလေးတွေပါ အတွေ့အကြုံတွေ အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်၊ မလုပ်တတ်ဘူး။ ဒါတွေအားလုံးက မင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေကို စာအုပ်ထဲမှာ အသုံးချပြီး အတွေ့အကြုံတွေ ပိုရစေချင်တယ်။
လူကြီးရော ကလေးတွေရော ဖတ်စေချင်လား။
"ဘဝအတွေ့အကြုံ အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ လူကြီးတွေ က အဲဒီအနှစ်သာရကို ပိုပြီး လေးနက်စွာ ဆုပ်ကိုင်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်က သတိမထားမိတဲ့ အရာတွေကို လူကြီးတွေ သဘောပေါက်သွားတတ်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေက အကန့်အသတ်နဲ့ ရေးထားတာမို့လို့၊ လူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီစကားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ကမ္ဘာကြီးကို ပိုခံစားရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
စိမ်းပြာစိမ်းသည် အများသူငှာ အများသူငှာအတွက် စာအုပ်ကလပ်တစ်ခုလည်းရှိသည်။လူကြီးများသည် ယောက်ျားလေးများ၏ စာကြည့်တိုက်ကို ဖတ်ရှုပြီး ၎င်းတို့၏ အထင်အမြင်များကို ဝေမျှသည့် အစည်းအဝေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ “ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ ဇာတ်ရုပ်က ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက်လို့ ထင်ရပေမယ့် အရွယ်ရောက်ပြီးချိန်မှာတော့ အဲဒီလူကို လုပ်ဖို့ အကြောင်းပြချက် ရှိတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အဲဒါငယ်ငယ်တုန်းကနဲ့ ခံစားချက်က တော်တော်ကွာတယ်။ ဘဝမှာ တူညီတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖတ်ရရင် ကွဲပြားတာကို တွေ့ရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ “
ရုပ်ပုံစာအုပ်ကမ္ဘာက ပျော်စရာကောင်းတာကို လူတွေတွေ့လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကလေးများသည် ၎င်းတို့၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသည် ဘဝအတွေ့အကြုံများကို ခံစားဖူးသောကြောင့် ကမ္ဘာကြီးကို နက်နက်နဲနဲ နားလည်နိုင်သည်။
"မှန်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကို မတွေးဘဲ ကလေးတွေကို ပျော်စေချင်တယ်။ လူကြီးတွေ အသုံးဝင်ချင်ပေမယ့် အဲဒါက ရုပ်ပုံစာအုပ်သက်သက်ပါ။ လူတွေက လောကကြီးက ပျော်စရာကောင်းတာကို တွေ့လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။"
အနုပညာရှင်တွေနဲ့ သင်ကိုင်တွယ်တဲ့ လက်ရာတွေကို ရွေးချယ်ဖို့ စံနှုန်းတွေက ဘာတွေလဲ။
"ဒါက ရုပ်ပုံစာအုပ်မို့ ရုပ်ပုံက လှတယ်။ စာသားလည်း ပါပါတယ်။ အသံထွက်ဖတ်ရတာ လွယ်ကူဖို့လည်း အရေးကြီးတယ်။ မျှော်လင့်ချက်ပေးမယ့် စာနာစိတ်ရှိတဲ့ ဇာတ်သိမ်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ရွေးလေ့ရှိတယ်။ ကလေးတွေ ဖတ်ရတာ သဘောကျတယ်။ "အိုး.. ပျော်စရာကောင်းတယ်" ဒါမှမဟုတ် "ငါတို့အကောင်းဆုံးပြန်လုပ်ရအောင်" လို့ထင်တယ်" ကလေးတွေကို တတ်နိုင်သမျှ တောက်ပတဲ့စာဖတ်စေချင်တယ်။"
အနုပညာရှင်ဆီက ဇာတ်လမ်းကို တိုက်ရိုက်ကြားခွင့်ရဖို့ ကြိုးစားတယ်။
မူရင်းပန်းချီကားများ ပြသထားသည့် ကော်ဖီဆိုင်
ရောင်းချခြင်းအပြင် မူရင်းပန်းချီပြပွဲများ၊ ပြခန်းဟောပြောပွဲများ၊ စာအုပ်အသင်းများ၊ ဟောပြောပွဲများနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကဲ့သို့သော လှုပ်ရှားမှုများစွာတွင် သင်ပါဝင်နေပါသည်။
“အခုက မူရင်းရုပ်ပုံစာအုပ် ပြပွဲတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီတုန်းက ပန်းချီဆရာဆီကနေ ဇာတ်လမ်းတွေကို တိုက်ရိုက်ကြားခွင့်ရတယ်။ စာအုပ်တွေ ရေးတဲ့အခါ ဘယ်လို အတွေးမျိုးရှိလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ၊ စာရေးဆရာရဲ့ စာအုပ်ကို ဒီထက်ပိုပြီး လေးလေးနက်နက် ဖတ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ပါဝင်သူတိုင်းကို သဘောကျပြီး တောက်ပတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ပြန်လာတဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။ စည်းလုံးမှုသဘော။"
သင်၏အနာဂတ်အစီအစဉ်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါ။
"ဧပြီလတွင်၊ Mekurumu ဟုခေါ်သော ထုတ်ဝေသူမှ မူရင်းပုံများ ပန်းချီပြပွဲကို ကျင်းပပါမည်။" ထုတ်ဝေသူသည်4ခုနှစ်တွင် တည်းဖြတ်သူတစ်ယောက်တည်းမှ စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အတွင်း ထုတ်ဝေခဲ့သော စာအုပ်လေးအုပ်၏ မူရင်းပုံများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်ဝေသူများအတွက် ခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ပံ့ပိုးနိုင်လျှင် ကောင်းမည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။"
တည်းဖြတ်သူသည် ၎င်းကို သူ့ဘာသာသူ စတင်ခဲ့ခြင်းက သူ့အတွက် ပြင်းထန်သော ခံစားချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။
"မှန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ထုတ်ဝေချင်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ရှိမှာ သေချာပါတယ်။ ထုတ်ဝေသူကြီးတစ်ခုက မထုတ်ဝေနိုင်ရင် ထုတ်ဝေနိုင်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ရှိမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီခံစားချက်ကို သိရတာ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ မဟုတ်လား။ စာအုပ်တွေကို လူတွေက ဖန်တီးထားတာကြောင့် လူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကို သူတို့စိတ်ထဲမှာ အမြဲရှိနေတယ်။"
တကယ်လိုအပ်တဲ့ စာအုပ်တွေကို ပို့ပေးချင်ပါတယ်။
"စာအုပ်တွေနဲ့ လူတွေ ချိတ်ဆက်ဖို့ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်ကို လာလည်တဲ့သူတွေက အဲဒီလို ကလေးတွေကို လက်ဆောင်တွေ ပေးချင်ကြတဲ့အတွက် ဘယ်လိုစာအုပ်ကောင်းလဲဆိုတာကို သူတို့ အတွေးအမြင်တွေ ယူလာကြပါတယ်။ ငါ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ လူတွေ၊"
မေးလ် မှာကြားတာနဲ့ မတူတာက သူတို့က စတိုးဆိုင်ကို တိုက်ရိုက်လာတာပါ။
"ဟုတ်ပါတယ်၊ လူအများစုက ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ စိတ်သက်သာရာရစေနိုင်တဲ့ စာအုပ်၊ ဒါမှမဟုတ် စကားပြောနေရင်းနဲ့ ကလေးနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ရယ်မောစေမယ့် စာအုပ်လိုမျိုး စာအုပ်တစ်အုပ်ကို တောင်းပြီး မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘယ်သူလဲ၊ အခုအခြေအနေက ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲလို့ တနည်းနည်းနဲ့ ခံစားရပါတယ်။ဒါဟာ လူကြီးတွေအတွက်တင်မကဘဲ ကလေးတွေအတွက်ပါ သင်ဘာကိုစိတ်ဝင်စားပြီး ဘယ်လိုကစားနည်းမျိုးလဲဆိုတာကို နားထောင်ရင်းနဲ့ ဒီလိုမျိုးစမ်းသုံးကြည့်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ စာအုပ်ကို နောက်တစ်ကြိမ် လာလည်တဲ့အခါ သင့်ကလေးက စာအုပ်ကို အရမ်းသဘောကျကြောင်း ကြားသိရလို့ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ ပွဲတွေက လူတွေနဲ့ စာအုပ်တွေကို ချိတ်ဆက်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် အခြေခံ အယူအဆကတော့ တစ်ယောက်ချင်းစီကို စာအုပ်တွေ လွှဲပေးဖို့ပါပဲ။ ပြည်သူတွေ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ စာအုပ်တွေကို ပို့ပေးချင်ပါတယ်။"
"TeAL GREEN in Seed Village" လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် လက်ဖက်ရည်သောက်နိုင်သည့် ရုပ်ပုံစာအုပ်ဆိုင်
တည်နေရာ- 2-30-1 Chidori၊ Ota-ku၊ တိုကျို
ဝင်ရောက်/ Tokyu Tamagawa လိုင်းရှိ "Musashi-Nitta Station" မှ4မိနစ် လမ်းလျှောက်ပါ။
ပုံမှန်အားလပ်ရက် / တနင်္လာ / အင်္ဂါနေ့
အီးမေးလ် / စိမ်းပြာရောင် ★ kmf.biglobe.ne.jp (★ → @)
အနာဂတ်အာရုံစူးစိုက်မှု EVENT ပြက္ခဒိန်မတ်လ - Aprilပြီလ 2022
ထုတ်ဝေသူ "Mekurumu" ပြပွဲ
“ကလေးတိုင်းကို စာအုပ်တွေ ပေးချင်တယ်”
မတ်လ (၃၀) ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မှ ဧပြီလ (၂၄) ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့)
ပုံမှန်အားလပ်ရက် - တနင်္လာနှင့်အင်္ဂါ
(၂-၃၀-၁ Chidori၊ Ota-ku၊ တိုကျို)
ဧပြီလ4ရက်နေ့ (Sat) 9:14-00:15
ဧပြီလ4ရက်နေ့ (Sat) 16:14-00:15
မော်ဒယ် ရထား မော်ဂျူး LAYOUT AWARD2022
10:00-17:00 (နောက်ဆုံးနေ့ 16:00)
(၁-၂၁-၆ Yaguchi၊ Ota-ku၊ တိုကျို)
အခမဲ့ / ကြိုတင်မှာယူမှုမလိုအပ်ပါ။
3rd Local Women Artists Exhibition- Kamata ရှိ အမျိုးသမီး အနုပညာရှင်များ ပြသခြင်း။
ဧပြီလ (၁၀)ရက်နေ့မှ မေလ (၁)ရက်နေ့အထိ
ပုံမှန်အားလပ်ရက်- ဗုဒ္ဓဟူးနှင့် ကြာသပတေးနေ့
Minami Seisakusho ပြခန်း
(2-22-2 Nishikojiya၊ Ota-ku၊ တိုကျို)
4ပြီ ၂၅ (နေ) ၁၁း၃၀-
အခမဲ့ / ကြိုတင်မှာကြားရန်လိုအပ်သည်။
သရုပ်ဆောင် - Takuya Kimura ( Ryuko Memorial Hall ၏ ပြတိုက်မှူး)
ယန်း 2,500 ဖြင့် ကြိုတင်စာရင်းပေးစနစ်
သရုပ်ဆောင်- Torus (Hal-Oh Togashi Pf၊ Tomoko Yoshino Vib၊ Ryosuke Hino Cb)
Kishio Suga နှင့် Buddha Heian ပြခန်း
Kishio Suga << Climate of Linkage >> (အပိုင်း) 2008-09 (ဘယ်ဘက်) နှင့် << Wood Carving Kannon Bodhisattva Remnants >> Heian Period (12th Century) (ညာ)
ဇွန်လ (၃)ရက်နေ့မှ (၁၂)ရက်နေ့အထိ၊
(၂-၃၂-၄ ကာမီကီဒိုင်၊ Ota-ku၊ တိုကျို)
Ota Art Archives (OAA)3Takashi Nakajima
Takashi Nakajima ၏အတိတ်ပြပွဲ
(KOCA၊ 6-17-17 Omorinishi၊ Ota-ku၊ တိုကျို)
အချက်အလက် ★ atkamata.jp (★ → ＠)
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.9 + bee!
Ota Ward ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအနုပညာသတင်းအချက်အလက်စက္ကူ "ART bee HIVE" vol.8 + bee!